Ungakha kanjani iphrofayli ye-backlink enenzuzo usebenzisa i-generator backlinks generator?
Bonke abanikazi bewebhu baphupha ukwenza ibhizinisi labo eliku-intanethi libonakale kumakhasimende angahle. Yingakho beqhuba umkhankaso wokukhangisa onobuchwepheshe obandakanya ukusebenza kwe-search engine, ukumaketha kwezokuxhumana, ukulandela isizukulwane esilandelayo, njalonjalo. Uma unento yokuhlanganyela nabathengi abanzi, ngokuqinisekile kudingeka uyenze.
Ukwakha isixhumanisi kungenye yezingxenye ezibucayi kakhulu ekusebenziseni injini yokusesha. Izixhumanisi ezingenayo zibalulekile ukuze zibekwe phezulu ekhasini lemiphumela yosesho futhi ziheha amakhasimende angakhona - how to network a home. Benza okuqukethwe kwakho kubonakale kuzilaleli zakho ezihlosiwe futhi ubuyekeze ibhizinisi lakho ekutshalweni.
Ukwakha izixhumanisi ezifakiwe akuyona isayensi ye-rocket kodwa ukuthola ama-backlink kusuka kumasayithi e-PR aphezulu angabonakala enzima kakhulu ku-newbie. Ngenhlanhla, kunezakhi eziningi zama-backlink ezisebenzayo ezisebusweni ezikhona kuwebhu kanye nabaxhumanisi be-search engine kanye nabakhi boxhumanisi, abazokusiza ukuthola ijusi lokuxhumanisa ngekhwalithi kusuka kumasayithi aphezulu we-PR.
Kulesi sihloko, ngizokwabelana ngamanye amathiphu indlela yokwenza ama-backlink angenayo mahhala. Ngaphezu kwalokho, lapha uzothola ezinye izindawo ezitholakalayo ezitholakalayo ezingasenza izinqubo zangaphandle zenzeke inqubo yokudala izixhumanisi zangaphandle zikhululekile.
Imithombo yeWebhu ekhonza njengama-generator backlinks
Lapha uzothola uhlu lwemithombo yewebhu lapho ungathola khona ama-backlink mahhala ngemuva kwesikhathi esifushane. Ngizokhuluma ngemithombo evelele yewebhu njengoMicrosoft, Facebook, Google, njalonjalo.
Ngaphambi kokuba siqale ukukhuluma ngale mithombo, ngingathanda ukuphawula ukuthi kunezinhlobo ezimbili ze-backlinks - zilandele futhi zilandele. Ezinye zezindawo eziphezulu ze-PR zinikeza lezi zinhlobo zezixhumanisi - Google+, YouTube, nokunye. Ngokuphambene nalokho, amapulatifomu enjengoba othintana nabantu njenge-LinkedIn ne-Facebook akwazi ukwakha kuphela ama-backlink asemuva.
Ngamafuphi, ukulandela ama-backlink yilabo abadlula ijusi lokuxhumanisa kusuka komunye umthombo ukuya komunye futhi basize ukuphakamisa isikhundla sewebhu ngegama elingukhiye elithile. Ukulandela ukulandelana kwe-backlink kunika amandla ukwakha igunya lomkhiqizo futhi ubonise iGoogle ukuthi umthombo wewebhu ohloniphekile kangakanani. Ake ulandele emuva kwe-backlink yizixhumanisi ezingadluli noma iyiphi ijusi yezixhumanisi futhi azikhombisi isikhundla sakho sekhasi. Noma kunjalo, namanje bangenza iphrofayela yakho ye-backlink ibe namandla uma ivela emithonjeni ephezulu ye-PR web.
umthombo onamanani amaningi kubasebenzisi abavela emhlabeni wonke. Yingakho ine-PageRank ephakeme kakhulu. Ukuthola izixhumanisi ezingenayo kusuka kule sayithi, uzokwengeza igunya lakho lomkhiqizo futhi uphakamise idumela lewebhu emehlweni e-Google.
Ukwenza i-backlink evela kuma-Microsoft, kudingeka uhambe ngezinyathelo ezilandelayo:
Yakha i-akhawunti entsha ku-Microsoft.
Ngena ngemvume uye kusigaba sephrofayela.
Vula isigaba sesixhumanisi bese wengeza isixhumanisi sakho kumbhalo okhonjiwe wokukhonjiswa.
Ukuqedela le nqubo, chofoza inkinobho ethi "Gcina".
i-Google Plus iyinethiwekhi yokuxhumana nabantu i-Google. Ungathola ama-backlink aphezulu kusuka kulo mthombo ngokulandela lezi zinyathelo:
Ngena ku-Google Plus usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Gmail.
Yakha ikhasi elisha lebhulogi yakho.
Bese uqinisekisa ikhasi lakho.
Futhi ekugcineni, engeza isixhumanisi sakho kusigaba se-URL.
Chofoza inkinobho ethi "Gcina".